Toerana fivarotana sosialy 10 hampandehanana ny fifamoivoizana amin'ny fivarotana | Martech Zone
Raha ny resaka fivezivezena amin'ny fiara dia misy tranokala sy serivisy maro izay ihany ny mpihaino tadiavinao hahatongavana. Azoko antoka fa efa naheno ianao momba ny sasany amin'ireo tranokala lehibe ara-tsosialy toy ny Groupon sy Living Social - saingy misy maro hafa izay nitombo laza. Ny sasany manokana indrindra amin'ny entana lafo vidy, na lasibatra mankany amin'ny Reny, ny sasany manandrana mitady ny zavatra mahafinaritra manaraka ao an-tanànanao. Ny kalitaon'ny fisafidianana ao amin'ireo gazety na tolotra ireo no mahatonga azy ireo ho lanin'ny mpihaino azy ary manampy amin'ny fipoahan'ny lazany.
Ho an'ireo mpivarotra mitady hitarika fivezivezena eo an-toerana dia mety ho fotoana mety indrindra hitondranao fifamoivoizana fivarotana, fivarotana an-tserasera izany - ary indrindra ny fahitana ao anatin'ny faritra misy anao. Ireto misy ohatra 12 amin'ny tranokala sasany. Manana bebe kokoa ve ianao? Mizarà amin'izy ireo amin'ny fanehoan-kevitra ary koa ny valiny azonao tamin'ny alàlan'izy ireo. Ataovy ao an-tsaina fa ny ankamaroan'ireo dia matetika ny fotoana ahazoana tombony amin'ny fihenan-danja ny serivisinao mba hitondrana ny fivezivezena fotsiny.
Fab.com - Mpamorona ve ianao, mpamatsy na mpanamboatra endrika tena tsara?
Eversave manolotra fifanarahana eo an-toerana tsy hay tohaina isan'andro. Ny tahiry azon'izy ireo dia azo omena ho Voucher Fanomezana namboarina ihany koa.
Gilt City dia fomba fiaina fomba fiainana an-tserasera izay mamaritra ny traikefa tsara indrindra any amin'ireo tanàna lehibe eran-tany. Manolotra tolotra tokana sy tokana izahay - ao anatin'izany ny fisakafoanana, fialamboly, hatsaran-tarehy ary fahasalamana - ho an'ireo lisitry ny mpikambana tsy mitsaha-mitombo.
Groupon mampifandray ireo mpividy sy mpivarotra amin'ny alàlan'ny vidiny sy ny fahitana. Raha trano fisakafoanana ianao, dia manara-maso nankafy - orinasa Groupon.
LivingSocial manampy ny orinasa eo an-toerana hahita sy hitazona mpanjifa bebe kokoa.
Distrikan'i Plum dia sehatra e-varotra sy fananan'ny haino aman-jery mifantoka tanteraka amin'ny Moms sy ny filan'izy ireo.
Polyvore dia sehatra fitadiavana sy fikarohana vokatra. Vokatry ny mpikambana ny sary sy ny sary miorina amin'ny alàlan'ny Clipper Tool na ny bokotra Polyvore. Ireo sary ireo dia azo jerena ao amin'ny Polyvore ho an'ny famoronana atiny sy ny fitadiavan'ny mpampiasa.
ScoutMob mampifandray ny mpiantsena amin'ny tsara indrindra amin'ny entana vita vita tsy miankina ary koa ny tantara sy ny fahitana nahatonga ireo zavaboary ireo ho amin'ny fiainana.
Thrillist - Isaky ny herinandro, Thrillist dia mandatsaka ny tolo-kevitr'ireo mpanjifany, manomboka amin'ny tsara indrindra amin'ny zava-baovao, ka hatramin'ny fahatsaram-panahy lalina. Tokony ho tena miavaka ianao mba hisongadinana - fa mendrika ny fiezahana tokoa! Ity misy ohatra tsara iray:
Vidio ny toeranao - Manatoha mpihaino lehibe kokoa ary manintona mpanjifa vaovao amin'ny alàlan'ny fanolorana fifanarahana amin'ny fotoana tena izy hifindra lisitra be loatra sy hamenoana ny fotoana voatondro!
Tags: maharitra mandrakizayfabfab.comgiltcitytolotra googlegrouponmiaina ara-tsosialydistrika plumPolyvorescoutmobthrillistyipit
Boky fampianarana an-tsary